नायिका प्रियका कार्की आक्रोसित बने पछि -
नायिका प्रियका कार्की आक्रोसित बने पछि
५ बैशाख २०७३, आईतवार २३:१९ April 17, 2016 wwwmophasalLeaveaComment on नायिका प्रियका कार्की आक्रोसित बने पछि
रमेश खड्का काशी / नेपाली रंगमञ्चका कलाकारहरु लाई समय सापेक्ष आफ्ना फेन तथा दर्शकहरुले सामाजिक संजालहरुमा राम्रा नराम्रा कमेन्ट गर्नु स्वाभाविक नै मानिन्छ । अझ त्यस माथि पनि महिला कलाकारहरु लाई आफ्नो फोटो सुटको तस्बिर सामाजिक संजालमा पोस्ट गरि सके पछी भद्दा गालिहरु बढी नै आउने गर्दछन । केहि कलाकारले यसलाई स्वाभाविक ठान्दछन भने कसैले सामाजिक बहसको रुपमा नै लिने गरेका छन् । यहि गालि र खराब कमेन्टको सिकार भएकी छिन नेपाली चलचित्रकी नायिका प्रियका कार्की ।
नायिका प्रियका कार्कीले आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुकबाट पोस्ट गरेका तस्बिरहरुमा अत्ति नै भद्दा गालिहरु आएको खुलासा गरेकी छिन .नायिका कार्कीले ‘’जब जब म नया फोटो हाल्छु, कुनै नया फिल्मको गीत या म्युजिक भिडियो शेर गर्छु, किन यति धेरै गाली गर्नु हुन्छ मलाइ? के मैले कुनै प्रकरको चोट पुराए? तपाइलाइ ब्यक्तिगत रूपमा ठेस पुराए?? ‘रन्डी’, ‘भालु’, ‘बेशिया’.. येस्ता शव्दहरु प्रयोग गरेर बडा आनन्द महसुस हुन्छ हो? एक्दम महान काम गरे झै लाग्छ हो?’’ भन्दै आफन्त सामाजिक संजालका साथीहरु प्रस्न गरकी छिन ।
त्यसै गरि नायिका कार्कीले “हामी कलाकार दिन रात मेहेनत गर्छौ। घरी फिलिम शुटिङ, घरी कार्यक्रम। दशै, तिहार, चाड पर्व केही न सोची यहाँहरुलाइ मनोरंजन दिन घरी कतार, घरी मलेसिया त घरी अस्ट्रेलिया पुग्छौ। के को लागि? येहि आलोचना खप्नको लागि? कति चित्त दुख्छ होला सोच्नुस।“ भनेर निकै भाबुक बनेकी छिन ।त्यसो त नायिका कार्कीको सामाजिक संजालमा पोस्ट गरिएको कमेन्टहरुलाई हेर्ने हो भने अति नै भद्दा गालिहरु रहेका छन ।
नायिका कार्कीले यस्तो कमेन्ट गर्नेहरु लाई सस्कार सिक्ने सुझाब दिदै “यहाँहरुको घरमा छोरी-चेली छैनन? एक पटक सोच्नुस त, तपाइको घरको दिदी-बहिनी, आमा, भाउजू, छोरी हरु माथी येस्तो शब्द कसैले प्रयोग गर्दा, तपाइलाइ कस्तो महसुस हुन्थ्यो?? ठिक त्येस्तै महसुस हुदो होला नि मेरा बुबा, आमा, भाइ र अन्य परिवारका सदस्यहरुलाइ। कहिले काहीँ मामुले फोन गरेर ‘छोरी कस्तो नराम्रो लेखेछ तिम्रो फोटोमा हेर त। छिटो डिलिट गर’ भन्नूहुन्छ। कति चित्त दुख्छ होला वहाँको।
तपाइलाइ यदि म मन पर्दैन भने बिन्ती मेरो पेजमा आउदै न आउनुस। बरु ब्लक गर्नुस मलाइ तर अश्लील, जथाभावी कृपया न लेखि दिनुस होला भनेर लेखेकी छिन ।
त्यसो त सामाजिक संजालमा नायिका प्रियकाको यस्तो स्टाटस आए पछी देश तथा विदेशबाट उनका शुभ चिन्तक तथा फेनहरुबाट निकै मोनोबल दरो हुने खाल्का कमेन्टहरु आएका छन् ।
नायिका प्रियंकाको यस्तो स्टाटस आए पछी युएईका समाजसेबी सन्तोष प्रसाई लेख्नु हुन्छ “Santosh Prasain Priyanka Ji, Don’t worry at all, as the number of people who are commenting on your post or photos are much less than those who are appreciating you. This is our society, we will always find different type of people around us, we just need to take those who are really giving you positive advice and guidelines. Personally, I feel proud that you are only one actress from Nepal who can represent yourself asavery talented artist to this world and I am damn sure that your parents and relatives will always understand you as Mum is doing i.e calling you and telling you to delete or take corrective action. Just keep in mind that you have very long way to march towards, so don’t get disturb with such silly things.”
त्यसै गरि प्रियकाको स्टाटसलाई कमेन्ट गर्दै लोक दोहोरी गायिका मुना थापा मगरले देशको कलाकारको सम्मान, देशबाटै शुरु हुन्छ। हामीले नगरे, कल्ले त? Be strong Priyanka ! भनेर लेखेकी छिन .त्यसै गरि साउदी अरब बाट टंक अधिकारी “यस्तो खराब कमेन्ट गर्ने मान्छेलाई राम्रो संग पढ्न र लेख्न पनि आउदै होला ,चिन्ता नगर्नु प्रेयांका हामी तिम्रो साथ मा छौ” भनेर लेख्छन ।
नायिका कार्कीको सामाजिक संग्जालमा आएका सबै खराब कमेन्टहरुको कार्कीले स्क्रिन सट गरि राखेको कुरा उनले सामाजिक संजालबाट बताएकी छिन ।
कलाकार रास्ट्रका गहना, देशका सम्पति हुन् जो जहाँ जुन क्षेत्रमा रहे पनि कलाकारको सम्मान गर्नु हामी सबै नेपालीको कर्तब्य हो . यस्ता रास्ट्रका गहनाहरु प्रति सामाजिक संजालमा भएका अपमान र गालि बिरुद नेपाल सरकार र साइबर सुरक्षा सम्बन्धि हेर्ने निकायहरुले अब कस्तो प्रतिक्रया लिने हुन् त्यो चै हेर्न बाकि नै छ ।
गरिबी निवारणमा कार्मचारी भ्रष्टाचारि
﻿﻿नेपाल र नामिबियाको खेल हेर्न प्रधानमन्त्री कीर्तिपुरमा
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको भवन पथरीमै राख्न संघको माग
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०८:१२ May 24, 2019 mophasal
याक्थुङ चुम्लुङ र मञ्चद्रारा किरात चाड तीन दिन विदाको माग
६ पुष २०७५, शुक्रबार १८:४५ December 21, 2018 mophasal
युएईमा ब्यबसायीक सफलतामा सिन्धुपाल्चोककी दिदीबहिनी रेखा र लक्ष्मी कार्की
१९ जेष्ठ २०७३, बुधबार २२:५६ June 1, 2016 wwwmophasal